Izay maha-mpaminany ny Fiangonana eo amin'ny firenena misy azy
Hira sy Tononkalo
Ny mpampinany: Olona nantsoin’Andriamanitra mano kana hiteny sy hitondra hafatra ho an’ny firenena sy ny fiaraha-monina misy azy.
Ny fiangonana mpaminany: Mpampita ny hafatr’ Andria manitra. Ny fiangonana no iantefan’ny hafatra, mandray ny hafatra ka efa maha-kendry, nanova ary naharesy lahatra azy izay vao mampita izany. Mila maha tsiaro ny fiantsoana azy ho mpaminany ny fiangonana ary mila mahatsiaro ho tompon’andraikitra.
A. Ny Fanjakana araka an’I Lotera
Araka an’I Lotera dia fanjakana roa no misy eto an-tany, izay samy mikatsaka ny hanasoa ny olona.
1. Ny Fanjakana “Temporel”
Iantsoana ny fitondrana mandamina ny tany sy ny fiaraha-monina, manao ny didy aman-dalàna, manao izay hahatonga ny tsirairay hisitraka ny zo aman-kasiny eo amin’ny tany onenany ary ireo manam-pahefana sy mpitondra fanjakana no tompon’ andraikitra ao anatiny.
2. Ny Fanjakana “Spirituel” na ny Fanjakana ara-panahy.
Ny fiangonana na ny mpitondra fiangonana homban’ny herin’ Andriamanitra no tompon’andraikitra ao anatin’io. Ao no misy ny asa ataon’ny Fiangonana mba haha tonga ny olona tsy an-kanavaka hiaina ny Fanjakan’Andriamanitra sy hisitraka ny fitahian’ Andriamanitra sahady.
B. Ny zava-misy eo anivon’ny fiaraha-monina ankehitriny
1. Eo amin’ny mpitondra fanjakana na ny manam-pahefana:
Lafiny ara-politika: ny hoe politika dia fitondrana na fandaminana tanàna na fiaraha-monina.Anjaran’ny mpitondra ny firenena no mampihatra izany. Tsy voahaja io hevitry ny teny hoe “politika”io satria fa tsy mikendry izay hahasoa ny fiaraha-monina sy ny firenena ny politikan’ny mpitondra sy izay nomena fahefana.
Lafiny ara-pitantanana : Tsy misy mangarahara ny fitantanana, mahazo vahana ny kolikoly sy ny tsolotra hany ka tsy mampahatahotra ny olona intsony ny fahefana.
Ny mahagaga anefa dia maro amin’ireny tompon’andraiki-panjakana ireny no olona zanaky fiangonana ihany. Hifandroritan’ny mpanao politika ny fahefana sy ny fitondrana ka tsy mety mari-toerana. Araka izany dia azo ambara fa tsy ny manao ny andraikiny araka ny rariny sy tokony hataony ireo manana andraikitra eo anivon’ny fanjakana sy ny fiaraha-monina ary ny sehatra’asa maro samihafa.
2. Eo amin’ny sara-babem-bahoaka :
Maro ny miodina sy miala amin’Andriamanitra ankehitriny. Simban’ny fahotana sy ny fahalovana ary ny faharatsiana ny fiaraha-monina. Asan’ny fiangonana ny famerenana ny maro ho ao amin’ny Tompo. Mamerina ny olona ho amin’ny fahamarinana ny mpaminany, fa izany no tsara sy ankasitrahan’ny Tompo, araka ny Dan. 12, 3b manao hoe : “ary izay mamerina ny maro ho amin’ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria”.
D. Ny adidin’ny Fiangonana amin’ny maha mpaminany azy
Ireo “ Asa Pastoraly”: tsy maintsy mampianatra sy manoro hevitra ary mampahery ny manam-pahefana sy ny vahoaka entiny ary mila mitarika ny olona tsy an-kanavaka ho amin’ny finoana an’I Jesoa Kristy ny Fiangonana.
1. Ny Fiangonana, antoky ny fitahiana ny firenena.
Araka ny tenin’ny Tompo tamin’I Abrahama hoe : “Aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany”. Nampitaina tamin’ireo Isiraely taranany indrindra ihany koa izany.Izany hoe ny fisian’ny Fiangonana sy ny fijoroany ho tena mpaminany marina dia antoka iray hitahian’ny Tompo ny firenena misy antsika.
2. Ny fiangonana mpampita hafatra
Milaza ny zava-misy marina, milaza ny tsy mety miseho eo anivon’ny fiaraha-monina sy ny firenena misy azy, mananatra ny mpitondra fanjakana na ny manam-pahefana raha manao zavatra tsy araka sitrapon’Andriamanitra.
Tsy mahazo mangina fotsiny eo anoloan’ny zavatra tsy mety na tsy araka an’Andriamanitra. Io ilay ambaran’ny Tompo tamin’I Jeremia eto hoe “Ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly”(Jer.1,10). Mila mandrodana sy mandrava ary manjera izay tsy mety ny mpaminany, ary mamboly sy mamboly izay araka an’Andriamanitra.
3. Ny Fiangonana fiantsom-pitahiana sy fiasam-pahasoavana
Ny zavatra izay tsy mety ho azon’ny olona na oviana na oviana avy amin’ny fanjakana na ny mpitondra azy, dia azony avy amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fiangonana.
4. Ny Fiangonana mpisorona
Manana adidy hivavaka, sy hitaraina, hitalaho sy hifona ho an’ny fireneny, mba hahafoana ny loza sy izay mety ho famaizan’Andriamanitra miseho.
Ny fiangonana izay mpaminany ankehitriny no hany antenaina. Mila mirotsaka an-tsehatra hanarina sy hanova izany zava-misy izany. Tsy mahazo mangina na mijery fotsiny izany rehetra izany. Raha mba ireo zanaky ny fiangonana na ny Kristiana manana andrakitra eo anivon’ny firenena na ny fiaraha-monina fotsiny aza no mijoro amin’ny fahamarinana, angamba mety hisy fiovana ny fiainam-pirenena.
Nitsikera sy nanakiana mafy ireo mpitondra fanjakana ireo mpaminany tao amin’ny Testamenta taloha, raha nanao ny tsy mety izy ireny. Nanitsy sy niteny mafy ireo manam-pahefana tamin’ny fotoan’androny koa Jesoa Kristy, dia tahaka izany koa no andrasana amintsika fiangonana. Mety hankahalaina ny Fiangonana amin’izany, mety ho voahenjika, fa tsy tokony hihemotra na hangina na izany aza fa izay no maha mpaminany.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.
Mpitandrina RATSIAVAHANA Zaiarimalala Edina
Crée le vendredi 07 septembre 2018 à 08:39:06
Jereo ihany koa
Mandehana araky ny fanahy (Gal. 5:16a)
Ry Havana, Fantatrao ve fa andro farany izao? ary efa antomotra ny faran\_'ny zavatra rehetra; na dia hifarana aza anefa izao tont[. . .]
ANDRIANASOLO Mbolatiana, Mpitandrina
Nantsoina ho mpanompon’ny hafa
Mitarika antsika hiaina ny ankalalahana ny fiantsoan’ny Tompo antsika amin’ny sehatra rehetra, indrindra fa ety anivon[. . .]
ANTSO HO AN'NY MPINO HO AMIN'NY FIADANANA
Faly miarahaba antsika rehetra amin\_'ny Anaran\_'ny Tompo Jesoa Kristy no niantso antsika rehetra mba ho amin\_'ny fibebahana mandr[. . .]
Ny mahakasika ny zioga sy ny hazofijaliana
Tezitra mafy ny mpanjaka indray andro ka hoy izy tamin\_'ny vahoaka. \_"Voasazy avokoa ianareo rehetra ka tsy maintsy handray sy[. . .]
Design by fjkm-ambalavaoisotry | 2018 - 2019